Dhiscaynta ilmaha | Zanzu
Qubashada uurka waa ummulida bisha u horaysa ee uurka halka uur jiifku aanu si ku filan u korin si uu ugu noolaado dibada ilma galeenka.
Astaamaha qubashada uurka ee hore
Astaamahaqubashada uurka ee hore waxay la mid yihiin kuwan muddada dhiiga caadada culus:
waayida dhiig dhexda siilka'
majiirka ama xanuunka caloosha.
Haddii aad leedahay astaamahan, la xidhiidh dhakhtar ama dhakhtarka haweenka.
Astaamaha qubashada uurka hore: luminta dhiiga ka imanaya siilka.
Astaamaha uur qubashada hore: majiir ama xanuun caloosha ah.
Sababaha qubashada uurka
Waxaa jiri kara sababo badan oo qubashada uurka ah. Badanka uur jiifta waxay leeyihiin ceeb oo si wanaagsan uma koraan. Waxay noqon kartaa natiijada, tusaale ahaan, caabuqa, cudurka hormoonada ama ku abqaalida liidata gudaha ilma galeenka. Inta badan ma cadda waxa sababay qubashada uurka. Caadi ahaan qubashada uurku saamayn kuma laha uuraysiga mustaqbalka.
Qubashada uurka maaha khaladka hooyada. Hawlaha jidhka caadiga ah, sida socodka ama wareega, weligeed maaha sababta qubashada uurka.
Galmada muddada uurka waxyeelo kuma aha uur jiifka. Waxaad samayn kartaa galmo iyaddoo dhakhtarku kugula taliyo mooyee.
Haweenayda uurka leh iyo lamaanaheedu waxay noqon karaan kuwa si degdeg ah ugu xidhan ilmaha aan dhalan. Marka uur jiiftu dhimato, tani waxay sababi kartaa murugo qoto dheer.
Labbada lamaane waxay xaq u leeyihiin inay murugoodaan. Waa inay la tacaalaan waayitaanka oo ay noloshooda meel uga helaan. Ka wada hadla ama kala hadla mid ka mid ah xirfad yaqaanada caafimaadka hoose.
Mowduuyo badan oo la xidhiidha Dhiscaynta ilmaha